गोर्खालीगले डाकेको सर्वदलीय बैठक सम्पन्न - खबरम्यागजिन
[ November 16, 2019 ] दार्जीलिङको बहसमा उठ्यो प्रश्न, स्थायी राजनैतिक सामाधानको लागि भाजपासित इच्छाशक्ति छ त? : अरू के के भने त प्यानलिष्टहरूले? मुख्य समाचार
Homeखबरकालेबुङगोर्खालीगले डाकेको सर्वदलीय बैठक सम्पन्न
January 11, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि कालेबुङ, खबर 0
कालेबुङ, 11 जनवरी।
वर्तमानको दार्जीलिङ पहाड़को राजनैतिक स्थिति र आगामी लोकसभा चुनाउ विषयमा छलफल गर्न अखिल भारतीय गोर्खालीगले डाकेको सर्वदलीय बैठक आज सम्पन्न भयो।
यहाँको श्यामादेवी भवनमा डाकिएको उक्त बैठकमा दार्जीलिङ पहाड़का राजनैतिक दलहरूमध्ये जन आन्दोलन पार्टी (जाप) र हिल काङ्ग्रेसले मात्र सहभागिता जनाएको थियो। गोर्खालीगका महासचिव प्रताप खातीका अनुसार जापबाट भुपेन राई र नरेश राई, काङ्ग्रेसबाट सुरेन्द्र पारेखलगायत तीनवटा सामाजिक सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू तथा ननिता गौतमले भाग लिएका थिए। आयोजक दल गोर्खालीगबाट भने अध्यक्ष एसके प्रधान, महासचिव प्रताप खातीलगायत अन्य उपस्थित थिए।
उनले जनाएअनुसार बैठकमा दार्जीलिङको वर्तमान स्थिति र आगामी लोकसभा चुनाउबारे चर्चा परिचर्चा भयो। आगामी 23 जनवरी अघि कालेबुङमा नै सर्वदलीय बैठक बस्ने र उक्त बैठकमा स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने पनि महासचिव खातीले बताए। यो कमिटीले हाम्रा मुद्दा र समस्याहरूलाई लिएर राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूसँग बैठक गरी छलफल गर्नेछ, उनले भने।
धेरैजसो राजनैतिक दल र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले ढिलो चिट्ठी पाएकोले गर्दा नै उनीहरू आजको बैठकमा सहभागी हुन नसकेको जानकारी गराउँदै आगामी 23 जनवरीअघि हुने सर्वदलीय बैठकमा भने सबै राजनैतिक दलसितै सामाजिक संस्थाहरू पनि उपस्थित हुने उनले आशा व्यक्त गरे।
उल्लेखनीय छ, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले अघिबाटै गोर्खालीगले डाकेको यो सर्वदलीय बैठकमा नजाने घोषणा गरिसकेको थियो।
ममता व्यानर्जीले बङ्गालमा रोहिङ्ग्यालाई पश्रय दिइरहेको विजयबर्गीयको आरोप November 14, 2019